जिल्लालाई विकास निर्माणमा अघि बढाउन मेरो उम्मेदवारी हो -सुन्दरमणी आचार्य - Suvham News
भुकम्प पिडितलाई छाप्रोबाट घरमा बसाउने काम हुनेछ : प्रदेश २ का उम्मेदवार सुन्दरमणी आचार्य
युवा उम्मेदवार सुन्दरमणी आचार्य काभ्रेली राजनीतिमा अझ युवा माझमा लोकप्रिय नाम हो । सानो उमेर देखि नै अझ भन्नु पर्दा विद्यार्थी राजनीतिदेखि यो अबस्थासम्म आईपुग्नुमा उहाँको लगन, जोश हो । राजनीतिमा सबैलाई मिलाएर लैजानु पर्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुने युवाका ढुकढुकी आचार्य सँग गरेको संक्षिप्त कुराकानी
चुनावी प्रचार कस्तो चल्दैछ ?
चुनावको मिति नजिकिदै जाँदा चुनावी प्रचारप्रसार जोडतोडले चलिरहेको छ । दोलालघाट पारी भुम्लु गाउँपालिकाको ८ वटा वडाहरु भ्रमण गरेर आयौं । अब हामी मण्डनको कार्यक्रममा छौं । हाम्रो क्रियाशील सदस्यहरुको भेला छ, अन्य कार्यक्रमहरु पनि छन् । समग्रमा भन्नु पर्दा हामीलाई चुनाव जोडतोडले लागेको छ ।
सुन्दरमणिको उपस्थिति कस्तो रहेको छ मतदाता माझ ?
चुनावमा मात्र हैन हर समय मतदाता माझ मेरो राम्रै उपस्थिति रहेको छ । म नेपाली काँग्रेसको राजनीतिमा २०६९ सालदेखि नेवि संघको जिल्ला सभापति भएर गाउँ गाउँमा गएर विद्यार्थी संगठनको इकाई गठन गर्ने नाममा म सबै गाउँमा पुगेको छु । महत्वपूर्ण स्कूल क्याम्पस सबै ठाउँमा पुगेको छु । त्यस कारणले म अहिले जति ठाउँमा पुगेको छु । प्रचारप्रसारका लागि सबै ठाउँमा राम्रो रेस्पोन्स पाएको छु । कार्यकर्ताहरुले मात्र नभएर आम मतदाताहरुले पनि राम्रो रेस्पोन्स दिनुभएको छ । जसले गर्दा मलाई झनै हौसला मिलेको छ । जुन नेपाली काँग्रेसको लागि र मेरो लागि राम्रो हो ।
आम नेपालीको अमन चयन शान्तिका लागि मेरो उम्मेदवारी । जिल्लालाई विकास निर्माणमा अघि बढाउन मेरो उम्मेदवारी हो । म युवाहरुलाई राजनीतिमा आकर्षित गराउन चाहन्छु । मेरो उम्मेदवारी मार्फत् युवाहरु पनि राजनीतिमा आएर सकारात्मक स्रोत, दृष्टिकोणका साथ सकारात्मक काम गर्न सक्छन् भन्ने एउटा छाप छोड्न चाहन्छु । नेपालको राजनीति जहिले पनि षडयन्त्र र रणनीतिको घेरामा सीमित भएको छ । जसको कारणले गर्दा युवा पुस्ताहरु राजनीतिमा आकर्षित भएका छैनन् । राजनीतिका उत्कृष्ट पाटाहरु षडयन्त्र र रणनीतिको घेरा बाहिर रहेका छन् । त्यसकारण राजनीतिको तर्फबाट देश र समाजका लागि राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने भावना दिलाउनको लागि मेरो उम्मेदवारी हो ।
सुन्दरमणि आचार्यलाई नै भोट किन ?
हो सुन्दरमणि आचार्यलाई नै भोट किन त ! देशको, जिल्लाको अनि प्रदेशको विकासको लागि भोट सुन्दरमणि आचार्यलाई हो । म यूवा जोश बोकेको अनि काँधमा एउटा सामाजिक जिम्मेवारी लिएर अघि बढेको व्यक्ति हुँ । त्यसैले मतदाताले मलाई नै मत दिनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । म पहिलो पटक जनताको माझमा आइरहेको छु । म टेस्टेड मान्छे होइन । तर म लामो समयदेखि काभ्रेको राजनीतिमा छु । म विद्यार्थी राजनीतिबाट राजनीति सुरु गरेर म काँग्रेसको क्षेत्रीय सभापति भएँ र अहिले मलाई नेपाली काँग्रेस पार्टीले जनताको माझमा उम्मेदवार बनाएर पठाउनु भएको छ । त्यसैले नेपाली काँग्रेसप्रति आभार व्यक्त गर्दछु । मलाई मत किन दिने भने म एउटा युवा सिधा सोच, दृष्टिकोणका साथ राजनीतिमा आएको छु । म राजनीतिलाई भजाएर धन आर्जन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दिन । म चुनाव जितेको भोलीपल्ट म आर्थिक पारदर्शीतामा विश्वास राख्ने मान्छे हो । म मेरो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्छु र प्रत्येक वर्ष सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्दै जान्छु । म पद र शक्तिको दुरुपयोग गरेर धन आर्जन काममा कहिले पनि लाग्दिन । दोस्रो कुरा म जनताको जनजीवनसँग गाँसिएका कुराहरुलाई सधैं प्राथमिक विशेषताका साथ बाटोघाटो, सिँचाइ, पुल, विद्युतीकरण, विद्यालय, भुकम्पपिडितका घरहरु यि सबै विषयहरुलाई समाधान गर्नको निम्ति अघि बढेर जनताको काममा अगाडि बढ्छु भन्ने कुरा व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
सुन्दरमणि आचार्यसँग जनताले के आश गर्ने ?
प्रदेश सभा २ को १ म सुन्दरमणि उम्मदेदवार बन्दा आम मतदाताहरुमा छुट्टै रौनक र खुशी छाएको छ । यूवा जोशलाई उम्मेलवार पाएकोमा मतदाता दङ्ग छन् । उम्मेदवार भएर चुनाव जितेर जाँदै गर्दा अहिले नयाँ बन्न लागेको प्रदेश सरकार हो । अबको पहिलो प्राथमिकता भनेको भुकम्प पिडितहरुलाई जतिसक्दो चाँडो छाप्रोबाट घरमा बसाउनको लागि के के पहल गर्नुपर्छ केन्द्र सरकारसँग त्यो पहल गर्छाैं । दोस्रो कुरा हाम्रो बेरोजगारीको समस्या छ र ग्रामीण सडकको समस्या असाध्यै छ । यदि राम्रो सडक मात्र बने पनि जनताहरुले राम्रो बाटो बन्यो भन्न सक्छ । के गरेर जनतालाई राम्रो हुन्छ, त्यहि गर्ने हो ।
यो यो कार्यहरु गर्छु भन्ने केही ड्राफ्टहरु छ ?
अवस्य नै, मैले चुनाव जितेर गए पछि कहाँ कहाँ के के काम गर्ने भनेर खाका तयार पारिसकेको छु । ड्राफ्टहरु तयार पारेको छु । उदाहरणको लागि देवभूमी बालुवाको अहिले चाहिँ पाँचखाल नपा १२ हो, मेरो गाउँमा कब नेपाल भन्ने नेपालको सबैभन्दा ठूलो पोल्ट्री फार्मिङ इण्डष्ट्रिज छ । त्यस्तै मेरै निर्वाचन क्षेत्र पाँचखालमा स्पेशल इकोनोमिक जोन विशेष आर्थिक क्षेत्र नेपाल सरकारले बनाउँदै छ । त्यो विशेष आर्थिक क्षेत्रमा नेपालका ठूला ठूला व्यवसायी घरानाहरुलाई बोलाएर उनीहरुको उद्योग प्रतिष्ठान स्थापना गर्न लगाएर पहिलो प्राथमिकता स्थानीयलाई रोजगारी दिन लगाउने र स्थानीय नभए मात्र उनीहरुलाई चाहिएको पदमा बाहिरको मान्छेहरुलाई रोजगारी दिने गरेर त्यहाँ उद्योग प्रतिष्ठानहरुको स्थापना गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना छ । त्यस्तै मेरो निर्वाचन क्षेत्र मात्र हैन समग्र काभ्रेलाई कसरी विकासमा अग्रगामी छलाङ्ग मार्ने भन्ने समेत खाका कोरोको छु ।
तपाईंसँग केही क्षेत्रगत प्याकेज छ ?
मसँग क्षेत्रगत प्याकेज छ । हाम्रो क्षेत्र धुलिखेलबाट सुरु भएर सल्लेडाँडासम्म पुग्छ । यो क्षेत्रमा पर्यटकीय सम्भावना प्रचुर मात्रामा रहेको छ । जस्तै धुलिखेल आफैंमा पर्यटकीय डेस्टिनेशन भएको ठाउँ हो । यो क्षेत्र विदेशी पर्यटकीय र नेपाली पर्यटकीयहरुमा लोकप्रिय छ । त्यसपछि पलाञ्चोक भगवतिलाई हेर्ने हो भने त्यो पनि त्यतिकै लोकप्रिय क्षेत्र हो । यसलाई धार्मिक पर्यटक स्थल बनाउन सकिन्छ । त्यस्तै दोलालघाट पनि उतिकै चिरपरिचित छ पिकनिकका लागि । भुम्लुटारभन्दा माथि सापिङमा मूलखर्क भिमसेनथान छ, त्यो ठाउँलाई पर्यटकीय डेस्टिनेशनको रुपमा बनाउन सकिन्छ । त्यसको लागि सडक राम्रो हुनुप¥यो । यसबारे हामी निक्कै गम्भीर छौ । सडकको अवस्था राम्रो हुने बितिकै त्यहाँ धेरै संख्यामा मानिसहरु जान्छन् र पर्यटकीय पूर्वाधारहरु विकास हुन्छ ।
महिला युवाहरुका लागि के योजना छ ?
महिला यूवाहरु पनि हाम्रो देशमा बेरोजगारी समस्याबाट पिल्सीरहेका छन् । उनीहरुका लागि पनि लागि आयआर्जनको तालिम मार्फत् हामी स्वरोजगार अभियान सुरु गर्छाैं । जस्तैः अचार बनाउने, मैन बत्ती बनाउने, उहाँहरुको शैक्षिक योग्यता अनुसारका तालिमहरु गाउँ गाउँमा दिएर त्यसबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने अभियान हामी चलाउँछौं । ग्रामिण भेगमा कृषि सहकारी, सहकारीका माध्यमबाट उहाँहरुको क्षमता अभिवृद्धि, समान सहभागितामा जोड दिएर मुलधारमा ल्याउन हामी तल्लिन छौं ।
काँग्रेसमै किचलो होला नि ?
बाहिर जति हल्लाहरु आएका छन् त्यसमा सत्यता छैन । आस्थावान कांग्रेसीहरु देश, विकास र पार्टीप्रति बफादार छन् । त्यस्तो कतै छैन । अहिले सबै काँग्रेस एक भएको अवस्था छ । कोही साथीहरुमा कहीँ केही किसिमको तुस छैन, यो इज्जतको सवाल हो, राजनीति जीवन मरणको सवाल हो भनी लागेका छौं । राजनीतिमा वान म्यान शो हुँदैन, यो सामूहिक क्रियाकलापद्वारा सामूहिक लक्ष्य हासिल गर्ने चिज हो । त्यसैले उम्मेदवार सुन्दरमणि आचार्य मात्रै होइन, सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताहरु उम्मेदवारीको रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ ।
बामगठबन्धनले के कति असर पु¥याएको छ ?
बामगठबन्धनले एक रत्ति पनि हामाीलाई असर पु¥याएको छैन । त्यस्तो गठबन्धनले कुनै पनि असर पुगेको छैन । किनभने बामगठबन्धनले सबैभन्दा गम्भीर त्रुटि कहाँ ग¥यो भने नेता पेवा हुन्छ कुनै पनि पार्टीको, कार्यकर्ता पेवा हुन्छ । संगठित सदस्य भन्नुस् या क्रियाशील पेवा हुन्छ । तर मतदाता कहिले पनि कसैको पेवा हुँदैन । बामगठबन्धनले बामगठबन्धनको नाममा पछिल्ला पटक खसेका मतहरुलाई आधार मानेर यि हाम्रा मतदाता, यि काँग्रेसका मतदाता भनेर जनतालाई किताकाट गरेको छ, त्यहि किताकाट आम मतदातालाई चित्त बुझेको छैन र त्यही कारणले यो पटक काँग्रेसलाई मत दिनुहुन्छ । हाम्रो ठाउँमा शहरी क्षेत्र, अर्ध शहरी क्षेत्र र ग्रामीण भेग पनि छ । ओभर अल २० प्रतिशत मत चाहिँ १४ भोट हुन्छ । एउटै भोट दोहो¥याएर नहाल्ने हुन्छ । त्यसकारणले पनि म लामो समयदेखि राजनीतिमा हिँडेको युवा नेता, विद्यार्थीबाट राजनीति सुरु गरेको कारणले म धेरै ठाउँमा गएर आफूलाई मतदाताहरुले मलाई धेरै राम्रो रेस्पोन्ज दिनुभएको छ । उम्मेदवारलाई भेट्दा उहाँहरुले गर्ने व्यवहारले पनि चुनाव जित्छु जस्तो लाग्छ ।
आफ्ना निकटतम् प्रतिद्वन्द्वीहरुलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
अहिले राजनीतिक सरगर्मी पनि त्यति तातिसकेको छैन । अहिले सबै राजनीतिक दलहरु जनताको घरदैलोमा पहिलो चरणमा पुग्नको लागि मात्रै हिँड्नु भएको छ । यसपछिबाट मात्रै रणनीति बनाएर के कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा हुन्छ । अहिले उहाँहरु पनि हामी जस्तै घरदैलो अभियान मै हो । उहाँहरुको पनि छुट्टै रणनीतिहरु होलान् । मलाई लाग्छ, उहाँहरुले महत्वपूर्ण कुरा के बुझ्नुपर्छ भने नेपाली काँग्रेस पार्टीमा बिख पस्यो, नेपाली काँग्रेस फुट्यो । फेरि केही वर्षपछि नेपाली काँग्रेसमा जादु पस्यो, फेरि जुट्यो । त्यो फुटेर र जुटेको पनि १२ वर्ष भइसक्यो । त्यति हुँदाहुँदै लामो समयपछिको अथक प्रयास पछि हामी साथीहरु अहिले एक ठाउँमा एक भएर उभिएका छौं । अस्तीसम्म काटाकाट, हिजोबाट चाटाचाट भएका एमाले र माओवादी साथीहरुको यो गठबन्धन कतिञ्जेल टिक्छ र यो गठबन्धनको हुनुपर्ने बोन्डिङ नै सक्षम भएको छैन । यो गठबन्धनमा जुन गम लगाएर टाँसेको छ, त्यो गम सुकेकै छैन । त्यसकारण त्यहाँबाट धेरै मान्छेहरु छुट्टिन सक्ने सम्भावना हुन्छ ।
तपाईंहरुले चुनावताका त मिठामिठा भाषणहरु लिएर जानुहुन्छ नि गाउँगाउँमा ?
कांग्रेसले मीठा मीठा भाषण गरिहनु नै पर्दैन । कांग्रेससँग जनताहरु परिचित भैसकेका छन् । संसारमा सबैभन्दा परिवर्तन हुने चिज समय हो । समयभन्दा पनि परिवर्तनशील मान्छेको मन हो । मान्छेले संसारभरि विकास आफैं आउँछ, कसैले दिनै पर्दैन । उदाहरणको लागि अहिलेको स्वास्थ्य क्षेत्रको । नेपालमा एमआरआइ आए, सिटीस्क्यान आए । पहिले एक्स रे मात्रै थियो, अहिले क्यान्सर टेस्ट गर्ने प्लेट स्क्यान मेसिन पनि आउँदै छ नी । यो कसैले पनि मैले ल्याएको भनेर फुर्ति गर्नै पर्दैन । यो त क्रमागत विकास हो, जुन देशमा पनि आउँछ ढिलो, चाँडो । नेपालमा पनि रेल आउँछ, कुनै दुविधाको कुरा छैन, केही समय लाग्ला । तर जनताबाट आएको करलाई जनताकै बिचमा पु¥याएर राजनीतिक दलले ठूलो फुर्ति लगाउनु हुँदैन । कि त राजनीतिक दलले भन्नुप¥यो, मेरो ठाउँमा रहेको मेरो पैतृक सम्पत्ति बेचेर मैले यो काममा लगाएको छु । जनताको जनजिविकासँग सरोकार राख्ने हो भने फुर्ति लगाउने हो । होइन भने जनताको करबाट आएको पैसालाई आफ्नो इच्छाअनुसारको योजनामा लगाएर यस्तो फूर्ति लगाउन मिल्दैन । हामीले भत्ता दियौ भन्नेले कहाँबाट भत्ता दिएका हुन ? पार्टी मुख्यालयबाट हो ? हो भने हामीले दियौ भन्नु उपयुक्त होला । अन्यथा वृद्ध वृद्धालाई दिइएको भत्ता जनताकै करबाट हो । अर्कोकुरा जब जनता सक्षम हुन्छ, त्यसबेला देखि यो गतिविधि चल्दैन । राजनीतिमा इमान्दारिता चाहिन्छ, इमान्दारिताको मामिलामा कम्युनिष्ट भन्दा काँग्रेस बढी सचेत छन् । मीठा कुरा भन्दा पनि राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।
अहिले त काभ्रेको निर्वाचनलाई राजनीतिक विश्लेषकहरुले मनि र मसल्स पावर भनेका छन् नि हो ?
भन्नेले के भन्यो भन्दा पनि आफूले गर्नुपर्ने के हो त्यतातिर लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । म क्रिटिक्स वेस पोलिटिक्समा विश्वास गर्दिन र मैले दिने अभिव्यक्तिमा म कुनै पनि राजनीतिक दल र त्यसका नेता कार्यकर्तालाई गाली गर्न रुचाउँदिन । तर हाम्रो साउथ एशियाको राजनीतिक दल भनेको अर्काे खराब भएको कारणले गर्दा म असल भन्ने राजनीति छ, त्यसको म विरोधी हुँ । यदि कसैले आफूलाई असल हो भन्छ भने आफूले आफैंलाई असल भन्न हुँदैन, त्यो प्रभावित गर्नुपर्छ व्यवहारले पनि । दोस्रो कुरा जहाँसम्म एमाले र माओवादीको गठबन्धनको कुरा छ, यो गठबन्धन चल्ने गठबन्धन नै होइन । किनभने एमाले माओवादीलाई एमाले बनाउन चाहन्छ, माओवादी एमालेलाई माओवादी बनाउन चाहन्छ । त्यसकारणले गर्दा यो एउटा मिसन वेश युनिफिकेशन हो, जुन निश्चित समयपछि आफैं टुट्छ । राजनीति ३ वटा चिज हुन्छ । परापूर्व कालदेखि नै राजनीति भनेको राजतेज केन्द्रमा बसेर त्यसको सेरोफेरोमा धनतेज र बलतेज घुम्ने हो । यो चाहिँ “ग्लोबल डायमेन्स अफ पोलिटिक्स” हो । मनि र मसल्स भन्ने कुरा खासै महत्व राख्दैन । किनभने काभ्रे भनेको राजधानीको यति नजिकको जिल्ला हो कि यहाँका अधिकांश जनता शिक्षित र सचेत हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई कसैको पैसाको बलमा, कसैको धाक धम्कीको बलमा उहाँहरुको मत खान सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । काभ्रेली जनता, काभ्रेली मतदाता एकदमै सचेत हुनुहुन्छ । त्यसैले यो मनि र मसल्स भन्नेहरुको कुरा मात्रै हो । यति सचेत मानिसहरु बसेको ठाउँमा कसैले मनि र मसल्सको कुरा गर्छ भने विपक्षीलाई गलत आक्षेप लगाएको भनेर काभ्रेली जनताले बुझ्छ ।
तपाईको भेगले मागेको विकासको कुरा गरौ न ।
डेभलपमेन्टको स्पीड रेभोलुशनको स्पीडभन्दा कम हुन्छ । तपाईले ५ वर्ष आन्दोलन गर्नुभयो भने एउटा राजनीति व्यवस्था फेरिन सक्छ । तर तपाईले ५ वर्ष जोडतोडका साथ काम गर्दा एउटा योजना मात्र सकिन सक्छ । भन्न खोजेको के हो भने क्रान्ति चाँडो हुने हो नी । क्रान्ति भन्दा विकासको गति कम नै हुन्छ । तथापि फेजवाइज रुपमा हामीले गर्ने हो । अहिले तपाईं बिहान सबेरै गाउँमा जानुभयो भने गाउँका आमा दिदीबहिनीहरु गाग्री बोकेर पानी लिन लस्करै रहन्छ । यो कुराले मलाई पनि छोएको छ । म शक्तिमा पुग्दा एकिकृत आयोजनाबाट कोशीको पानी लिफ्ट गरेर ल्याएर गाउँगाउँमा खुवाइयो भने त्यो दिर्घकालसम्म रहन्छ भने एउटा मूलबाट पानी ल्याएर जनतालाई पानी खुवाए फेरि दुई वर्षमा मूल सुक्छ, त्यसरी हुँदैन । त्यसकारण हामीले पाँचखाल नगरपालिकालाई र भुम्लु गाउँपालिकालाई एकिकृत खानेपानी आयोजना मार्फत् पिउने पानी उपलब्ध गराउने वचन बद्धता व्यक्त गरेका छौं ।
स्रोत- अन्नलाईन काभ्रे
Prevओखलढुंगाको सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा राखिएको बम नेपाली सेनाले निष्कृय पारेको हो।
Nextबोलेरो जीप पल्टियो बाबु विष्टको मृत्यु, बनेपा तनाब ग्रस्त